﻿	Ihe A Na-ejikarị Eme Mmanụ Nwa! - Ndụmọdụ Na Nnukwu Echiche!
Ntụziaka nke anụ ezi ọbọp obere smokies na agba aja aja na butter
foto nke esi nri macaroni na chiiz
ezi anụ ezi stew ite Ezi ntụziaka
ị nwere ike imi ọka oyi kpọnwụrụ na nsị
Ihe A Na-ejikarị Eme Mmanụ Nwa!
Ndozi Ọsọ: Na-eji maka Mmanụ Baby
ọ dịghị akpọ akpọ cheesecake na vanilla wafers
Ntụtụ ya ka ọ zọpụta ya!
Soro Wepụta Pennies na Pinterest maka ndụmọdụ ndị ọzọ, echiche na ntụziaka!
Hapụ ndụmọdụ nke gị nke ọma n’okpuru ebe a!
Mmanụ nwa bụ otu n'ime ngwaahịa ndị dị ọcha, dị ọnụ ala, ma baa uru, ị gaghị enwe ihe ngọpụ ka ị ghara idebe ya!
Ezigbo ụkwụ: Mmanụ nwa na-eme akwa (na ọnụ ala) dochie anya ude ntutu na-agbakwunye ya n'otu oge!
Agba mwepụ: Ọ bụrụ na ị na-eme ụfọdụ agba ma nwee agba na anụ ahụ gị, jiri obere nwa mmanụ wepu ya.
Maka nnukwu mpụga: Debe ọchịchị nke dị n’èzí dị mkpụmkpụ ma dị ụtọ nke na - ete mmanụ n’elu akpụkpọ gị ka ị chụghachi nchinchi ma dobe ikuku ikuku na mmiri. Dị mfe!
Ezigbo ntutu: Ọ bụrụ na nwa gị etolite okpokoro isi, obere mmanụ mmanụ dị nro ga-enyere gị aka tufuo ya!
Mee ka akpụkpọ ahụ gị dị elu: Jiri mmanu nwa maka ude ntutu isi mgbe emechara ntutu iji gbochie oku. Ọ bụ ihe dị mma dị egwu, ị nwere ike iji ya mee ka anụ ahụ gị dị mma kwa ụbọchị, mee ka ọnya gị dị nro ma dị ọcha maka ụlọ mani pedi ahụ, na ọbụnadị na-eme mmanụ dị egwu, hypoallergenic na ọnụ ala dị ala!
Lube ya: Jiri mmanu nwa mee ka oghere uzo na-eme mkpọtụ, mee ka ọnụ ụzọ na-amị amị ma mechie, meghe zippers isi ike imeghe ma mechie.
Mee Up remover: Ọzọ mara mma mara mma! Tinye mmanụ nwa na mpe mpe akwa na ọ ga - ewepụ anya gị (ọbụlagodi ihe na - egbochi mmiri!)
Hichaa egbe ahụ: Mmanụ Baby nwere ike igbari ihe ọ bụla rapara, yabụ hapụ ya ka ọpụpụ akpụkpọ ụkwụ gị ma ọ bụ ihe nnweta nke akwụkwọ mmado ma ọ bụ teepu hapụrụ. I nwekwara ike iji ya maka ouchless iwepu bandaid . Naanị hapụ mmanụ nwa ahụ ka ọ banye na goo nke na-adịgide adịgide maka nkeji ole na ole, wepụsị ya!
Bọbụl gọm: Iji wepu afụ chịngọm na ntutu isi na ịhịa aka na obere nwa mmanụ! Nwere ike ịhapụ ka ọ nọdụ maka nkeji ole na ole ka ọ rụọ ọrụ ọ bụ ihe ịtụnanya.
Mwepụ igbu: Ọfọn, ọ dịkarịa ala, nwatakịrị ahụ nwere ụdị! Nwatakịrị gị ọ na-egbu egbugbu nwa oge n'egedege ihu ha ụbọchị tupu foto ụlọ akwụkwọ? Naanị ịhịa aka na egbugbu ya na obere mmanụ nwa ọ ga-ehichapụ ya ozugbo.
Atụmatụ ndị ọzọ ebe a
Isi mmalite: http://www.homesessive.com/view/unusual-uses-baby-oil-and-baby-powder http://www.instructables.com/id/11-Unusual-Uses-for-Baby-Oil/ http://projectfidgetyfingers.blogspot.com/2010/02/45-uses-for-baby-oil.html